Ahoana no hamahana ny olako ao amin'ny Twitter? ▷ ➡️ mpanaraka ▷ ➡️
Enga anie 12, 2021 0 fanehoan-kevitra 792
Miaraka amin'ny Ivotoerana fanampiana Twitter, ny mpampiasa dia afaka mamaha ny olana mifandraika amin'ny kaontin'ny mpampiasa azy: Login, Kaonty nampiatoana, mombamomba voajirika ary manatsara ny fiarovana ny kaontiny eo amin'ny lampihazo.
Ny mpampiasa dia afaka mamaha ny olan'ny raharaha ankapobeny amin'ny fampiasana: fampandrenesana, sary ary horonan-tsary, fanontaniana mifandraika amin'ny mombamomba azy, Fisolokiana amin'ny maha-izy azy, fanararaotana na fanorisorenana, phishing na spam ary atiny mora tohina.
Ampahafantarina ao amin'ny Ivotoerana Fanampiana Twitter azy ny mpampiasa Fitsipika sy politika Fampiasana ny tambajotra sosialy; Ity dia hitarika anao rehefa manao publication, mandray anjara amin'ny resaka, amin'ny Messages, mba tsy hanao karazana fanararaotana sy lalàna mandika.
Fampisehoana Twitter Tip Jar vaovao
Twitter dia nitatitra vaovao fiantsoana antsoina hoe Tip Jar, amin'ny Espaniôla dia midika hoe siny misy torohevitra izy io; izay hanamora ny Mpampiasa handoa ny hafa amin'ny Tweet mahasarika, manaitaitra, mahatakatra ary manome aingam-panahy.
Araka ny Twitter, fantatry ny mpampiasa fa a Ny kaonty dia alefa amin'ny Tip Jar rehefa mahatsikaritra ny kisary Tip Jar eo akaikin'ny bokotra Follow amin'ny pejy momba anao. Mba handoavana vola dia mila tsindrio fotsiny ilay kisary ary hiseho ny menio fandoavam-bola nomen'ny Mpampiasa.
Avy eo, safidio izay serivisy fandoavam-bola tianao ary dia hisy izany nafindra tao amin'ny Twitter amin'ny tranokala ahafahanao mampiseho ny fanohananao amin'ny vola nofidianao. Tip Jar dia misy serivisy toy ny: PayPal, Venmo, Patreon, Cash App ary Bandcamp.
NAHOANA NO TOKONY hametraka ny loharanom-pahalalana amin'ny TWEET?
Ny anjara asan'ny Tags Font del Tweet dia manampy ny mpampiasa hahatakatra tsara ny fomba namoahana ny sioka. Tags toy izany, ampio sehatra bebe kokoa amin'ny sioka sy ny mpanoratra azy, manamora ny fandikana sy ny fahatakarana tsara ny fikasany
Raha tsy fantatry ny Mpampiasa ny loharano dia mitaky izany mitadiava fampahalalana bebe kokoa ary manapaha hevitra raha azo itokisana ny atiny; Mba hanaovana izany dia mila: Tsindrio ny Tweet iray hankanesanao any amin'ny pejy antsipirihany; eo amin'ny farany ambanin'ny sioka dia ny Tag Source, ohatra: Twitter for Android.
Ny Twitter Tag for Advertisers ao amin'ny Tweet dia manondro fa noforonina tamin'ny alàlan'ny Mpamorona ny doka Twitter. Amin'ny tranga sasany, ny mpampiasa dia mety mahatsikaritra fa misy ny sioka sasany avy amin'ny rindranasa hafa fa tsy ny Twitter.
Lazao amin'ny Twitter ny tantaranao
Raha tadiavin'ny Mpampiasa tantarao ny tantaranao manokana, Manolotra ireto fiasa ireto ny Twitter: Mamorà kofehin'ny Tweet miaraka amin'ny fikasana hahatratra ny fiatraikany lehibe indrindra, tadiavo ny vondrom-piarahamoninao amin'ny alàlan'ny lohahevitra sy lisitra, milamina ary ampio hampiely ny teny amin'ny alàlan'ny tenifototra.
Ho fanampin'izay, ny Mpampiasa dia tsy maintsy mizara tsy tapaka amin'ny fampiasan'ny vondrom-piarahamoninao ny Retweet no nanamarika na tsia, mandefasa sary sy horonan-tsary amin'ireo mpanaraka anao sy ny vondrom-piarahamoninao mba hanananao fifandraisana manokana.
Ny Mpampiasa dia mitaky fizarana izay mitranga amin'izao fotoana izao fotoana mivantana; ary ataovy manokana ny momba ny Mombamomba anao, eto dia tsy maintsy havaozina foana ny tantaram-piainana ary apetraka eo an-tampony ny hafatra farany anao.
1 Fampisehoana Twitter Tip Jar vaovao
2 NAHOANA NO TOKONY hametraka ny loharanom-pahalalana amin'ny TWEET?
3 Lazao amin'ny Twitter ny tantaranao